Ny MK-677 (Ibutamoren) mandeha tsara amin'ny hozatra ho an'ny hozatra? Famerenana samirery
/Blog/Gallery/Ny MK-677 (Ibutamoren) mandeha tsara amin'ny hozatra ho an'ny hozatra? Review Sarm [2019 NEW]
Posted on 09 / 29 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
1.Inona ny MK-677 (Ibutamoren)?
Ny vovo-dronono MK-677 (Ibutamoren) (159752-10-0) dia secretagogue hormonina mitombo (GHS) vaovao. Ny sekretera hormonina fitomboana dia sisan-javatra natao hananganana ho toy ny tsiambaratelo hanampiana ny fampiakarana ny haavon'ny hormone mitombo. Mitombo ny hormonina fitomboana mba hiasanao tsara ny vatanao. Izany dia manampy anao hanatsara ny fivoaran'ny hozatra.
Ny vovoka MK-677 (Ibutamoren) tsy manelingelina amin'ny fomba ara-batana sy biolojika hafa toy ny famokarana hormonina voajanahary. Ny dikan'izany dia hahatratra ny fitomboan'ny haavon'ny hormonina fitomboana ianao nefa tsy mahatsapa fiantraikany amin'ny lafiny toy ny famoretana testosterone. Betsaka ny tombony azo amin'ny fanatanjahan-tena MK 677 fa maro kosa no horesahantsika ao anatin'ity lahatsoratra ity.
2. Maninona no manana anarana samihafa ny MK-677 (Ibutamoren)?
Ibutameron dia fantatra koa amin'ny mk677 nutrobal, Ibutamoren Mesylate ary misy olona mety hiantso azy io ho toy ny vovo-javamaniry MK 677 (Ibutamoren). Ireo anarana rehetra ireo dia miresaka fiasa mitovy. Izany dia satria ny olona sasany dia miantsena ny sangan'asa ho toy ny haingam-pandeha fa ny manam-pahaizana sasany kosa milaza fa tsy fianakavian'ireo sarms izany.
Ibutamoren dia raisina ihany koa ho fanafody manokana satria tsy dia fahita loatra ny mahita zava-mahadomelina izay mety manentana ny haavon'ny fitomboan'ny hormonina mitombo ary ny IGF-1 (singa mitombo toa ny insulin).
3. Ahoana ny fiasan'ny MK-677 (Ibutamoren)?
Ny vovoka MK-677 (Ibutamoren)159752-10-0) miasa ny nutrobal amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny tsiambaratelo amin'ny fitomboan'ny hormone mitombo (GH) sy ny fitomboana-1 (IGF-1) .Izany no hanatanterahana izany amin'ny maka tahaka ny fomba fiasan'ny hormonina ghrelin. Ghrelin dia hormonina miteraka raha tsy mbola sendra azy ianao taloha.
Izany dia mamela azy hamatotra mora amin'ireo iray amin'ny ati-doha GHSR (mpankasitraka ghrelin). Raha vao voagejanina ireo mpandray vahiny dia mifoha ny famokarana hormonina mitombo ao anaty ati-doha. Izy io dia miasa toy ny neuropeptide ao amin'ny CNS (système saraf sentral). Ity hormonina ity dia malaza amin'ny fahaizany manentana ny fahazotoana.
Izy io koa dia mifehy ny fizarana angovo ao amin'ny vatantsika ary misy fiantraikany amin'ny fomba fitrandran'ny vatana ny tavy. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny vatana ho sitrana indray amin'ny fepetra toy ny hatavezana sy ny diabeta Type 2.
Rehefa ampiasaina amin'ny tenany manokana, ny mk 677 dia afaka mampitombo ny famokarana HGH nefa tsy manelingelina hormonina hafa. Betsaka amin'ireo mandray izany koa no midera ny fangatahana mk 677 satria tsy manafoana ny fatran'ny testosterone sy ny fitomboan'ny hormone mitombo, izay bonus lehibe izany raha mihevitra ny tombontsoa ianao.
4. Tombontsoa MK-677 (Ibutamoren)
Ny fitomboan'ny hozatra sy ny fanarenana
Ny iray amin'ireo tombony mk 677 lehibe dia ny fanamafisana ny fitomboan'ny hozatra sy ny fanarenana. Satria ny famoahana mk 677 dia mampitombo ny haavon'ny IGF-1 sy GH dia azon'ny mpampiasa atao moramora ny habeny betsaka. Nohana izany tamin'ny fikarohana sy ny siansa izany. Ny fandinihana natao dia mampiseho fitomboana be amin'ny hozatra, indrindra amin'ny olona tsy fahampian'ny hormonina mitombo ary ireo lehilahy antitra indrindra amin'ny 60 taona sy ambony. Betsaka ny mk 677 famerenana avy amin'ny mpampiasa dia manoro hevitra ihany koa fa misy voka-tsoa lehibe amin'ny fananganana hozatra ny hozatra.
Mihamaro ny taolana
Rehefa mihalehibe ny fihenan'ny taolana dia mihena ny fitovian'ny taolana. Betsaka ny olona be taona no mijaly amin'ny taolana sy ny osteoporosis ka mahatonga ny tsy fahatratrarana aotoboka sy fanaintainana. Ny zaza sy ny tanora sasany dia mety handia izany ihany koa fa mety noho ny fihenan'ny fihenan'ny taolana. MK-677 vovon-drongony mandrisika ny fitomboan'ny hormonina ary manetsika ny fihenan'ny taolana. Izany no fomba ahafahan'ny fanafody manampy amin'ny fanamafisana ny taolana.
Misoroka ny fandaniana hozatra
Tao anatin'ny fandalinana fikarohana siantifika natao tamin'ny olona fifadian-kanina valo, Ibutamoren mk 677 dia afaka nanodina ny fahaverezan'ny hozatra ary ny fahaverezan'ny proteinina. Ny fandinihana iray hafa dia nanaporofo fa ny fanafody koa dia nanampy ireo marary efa be taona izay misy fihenan-doha ka mahatratra ny tanjaka hozatra ary mihatsara kokoa.
Tendon Growth and Injra fisorohana
Saika ny tompon'andraikitra rehetra dia miaiky fa ny ratra iray manokana no nanemotra ny fivoarany tamin'ny fanakatonana azy ireo tsy ho eo amin'ny toeram-pitsaboana, andro maromaro, na herinandro aza. Raha tsy mitsahatra mitaky ny ankamaroan'ny fotoananao ao amin'ny gym, dia tsy azo ihodivirana ny ratra. Ary koa, ny fitomboan'ny haingam-pandeha hozatra vokatry ny fotoam-piofanana henjana ataonao, dia mety hiteraka faneriterena be loatra amin'ny orinasanao, anisan'izany ny taolana mitarika ratra.
Raha ny fanarenana ny tendons sy ny ligament ary ny taolana no simba, dia ilaina ny fitomboan'ny hormone mitombo. Amin'ny fampitomboana ny haavon'ny fitomboan'ny hormone mitombo, ny famatsiana mk 677 dia miantoka fa ny fanamboarana mpampitohy dia namboarina sy hitazona ny fahasalamana koa. Mihatsara ny taolana ary dia mihatsara ny taolanao, izay ahafahanao mihazona hozatra bebe kokoa. Vokatr'izany dia tsy zatra ny ratra mahazatra intsony ianao.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia miaiky fa ny mk677 dia nanampy azy ireo fatiantoka matavy. Mk 677 ny fatiantoka matavy dia voalaza fa tena mahagaga satria GH no hany hormonina mety hanampy anao handoro ny subcutaneous sy visceral fat, raha mamela anao hamolavola hozatrao hozatra. Vokatr'izany dia Ibutamoren dia ampiana foana amin'ny fandaharana famerenam-batana.
Tsara kokoa hoditra, fantsika sy ny volo
Ny hormonina fitomboana dia voaporofo fa nanatsara ny sela hoditra. Koa satria ny MK-677 dia manetsika ny GH, izany no mahatonga ny fanafody hamelomana sy hamelomana indray ny fisehon'ny volo, ny fantsika ary ny hoditra.
Vokatry ny Nootropic
Tombontsoa mk 677 iray hafa dia ny mandrisika ny mpandray ny ghrelin ary mety hiteraka nootropic vokatry. Araka ny fikarohana fikarohana navoakan'ny NCBI dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny fiasan'ny atidoha amin'ny alàlan'ny fitaoman'ny mekanika roa tsy ankolaka. Ireo mekanika ireo dia misy ny fampiroboroboana ny IGF-1 izay manampy amin'ny fanamafisana ny fihazonana ny fahatsiarovana sy ny fahaizana mianatra. Ary, amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny kalitao sy ny habetsaky ny torimaso REM. Zava-dehibe ny torimaso satria miantoka ny fiasan'ny kognitif tsara indrindra.
Manakana ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo
Ny Mk 677 dia mampitombo ny IGF-1, IGFBP-3, ary ny fatran'ny hormonina mitombo amin'ny zaza tsy ampy hormonina fitomboana nefa tsy manova ny fitambaran'ny cortisol, ny prolactin insuline, ny glucose, tiroxine (T4), ny thyrotropin na triiodothyronine (T3).
Ibutamoren dia nampiseho fiantraikany mitovy amin'ireo lehilahy tsy dia mahomby GH, fa nitombo ihany koa ny glucose sy ny insuline.
Ny hormonina fitomboana dia mampisondrotra ny fanasitranana ny ratra ary ny fanarenana ny hozatra, noho izany dia manampy amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny hormonina fitomboana ny Mk 677. Tohanana amin'ny tatitra momba ireo mpanao bodybuilders izay nampiasa ibutamoren taloha.
Ireo olona izay nampiasa MK-677 talohan'ny nitaterana fahatsapana mahasosotra azy avy amin'ny hangovers.
Amin'ny maha-Ghrelin Mimetic dia tokony hanantena ny hisakafoanana ianao mandritra ny Ibutamoren. Na mahasoa na misy maharatsy izany manaraka ny tanjonao dia mila mahatakatra ianao fa iray amin'ireo vokan'ny mk 677 tsy mampiady hevitra.
Fahasalamana amin'ny ankapobeny
I Ibutamoren dia miasa betsaka amin'ny fanamafisana ny hery fiarovana ao anaty antsika. Ny fahafahan'ny vatanao miady sy manalavitra ny aretin'ny vanim-potoana sy ny allergy dia mihatsara kokoa. Hanomboka miaina fiainana milamina sy feno fiadanan-tsaina ianao.
5. Tsingerin'ny MK-677 (Ibutamoren)
Cycle 1: Mba hahatratrarana ny fahazoan-dàlana optika MK 677 (Ibutamoren) tsara indrindra, mila manomboka amin'ny 10mg isaky ny 24 herinandro ho an'ny herinandro 11 voalohany alohan'ny hanampiana ny 20-25mg isaky ny ora 24 any aoriana any manodidina ny 12th herinandro. Ity dia azo raisina ho toy ny ranoka, am-bava na amin'ny kapsul.
Cycle 2: azonao atao koa ny manomboka amin'ny 15mg isaky ny ora 24 ary manitatra ny halavam-pandehanao MK 677 mihoatra ny herinandro 12. Raha manao izany ianao dia tsy mila miahiahy momba ny olana amin'ny glandinao hipoka na ireo voka-dratsy hafa.
Cycle 3: Ny ankamaroan'ny bodybuilders mihetsika amin'ny tsingerin-taona hanitatra ny dosie MK 677 ho an'ny 50mg isan'andro ary mihazona kitro MK 677 maharitra valo herinandro.
Cycle 4: Raha te hanangana hozatra ianao dia manome soso-kevitra ny mpampiasa maka dosage Ibutamoren an'ny 30mg isaky ny ora 24.
Siklety 5: Raha ny hitrandraka tavy no tanjonao voalohany, dia mpampiasa maro efa za-draharaha no manome soso-kevitra ny maka 20mg isaky ny ora 24.
Cycle 6: Raha ny manasitrana ny ratra dia ny tanjon'ny MK 677 an'ny 10-20mg isan'andro no tadiavina.
Ny vaovao tsara dia tsy mila PCT (Post Cycle Therapy) ho an'ny mk 677 satria tsy manelingelina hormonina io.
6. Inona no fatra mety tsara indrindra MK-677 (Ibutamoren)?
Ny fikarohana sy ny tatitra avy amin'ireo mpampiasa efa za-draharaha dia mampiseho fa ny 20mg ka 30mg dia fatra ambony indrindra MK 677 ambony indrindra. Ny mpampiasa sasany dia nitatitra fa naka mihoatra ny 30mg ibutamoren isan'andro, saingy tsy nahazo valiny tsara kokoa izany. Ny halavam-pandehan'ny MK 677 dia nanaporofo fa manan-danja kokoa noho ny fatra ibutamoren.
Tena ilaina ny maka ibutamoren mandritra ny fotoana maharitra. Ny haavon'ny hormone mitombo dia tsy maintsy manangana tsikelikely amin'ny vatanao. Ny fananganana tsikelikely ny hormonina dia mety maharitra hatramin'ny herinandro vitsivitsy alohan'ny hahatombahanao hahatsapa ny vokatr'izany.
Ny tanjonao dia mamaritra ny haben'ny mk 677 izay tokony alainao. Ireto misy dosie natokana ho an'ny tanjona samihafa.
Fananganana hozatra: 30mg isan'andro
Fahaverezan'ny tavy: 20mg isan'andro
Ny fanasitranana ny ratra: 10-20mg isan'andro
Raha tsy nampiasaina ianao Ibutamoren vovoka (159752-10-0) taloha, dia atolotra anao hanomboka amin'ny 10mg ianao hahita ny fomba namalian'ny vatana azy.
7. Misy vokany ve ny MK-677 (Ibutamoren)?
Mk-677 dia zara raha misy vokatra kely sy maditra kely raha misy, ary raha mitranga izy ireo dia mora tanterahina. Ireto misy sasany amin'ireo lafiny amin'ny lafiny:
Ny torimaso lava
Ny mpampiasa sasany dia mety matory tsy mitsahatra mandritra ny ora 12 ora aorian'ny fisarahana ibutamoren ka miteraka fahatapahana amin'ny ankapobeny ny ampitson'iny. Raha sendra izany ianao dia tokony hampidina ny fatra na zaraoo in-droa isan'andro ary io vokatra an-dàlana MK 677 io dia hiala irery.
Na dia mety tsy hitranga amin'ny mpampiasa rehetra aza dia misy mpampiasa sasany mahazo fihenan-kibo malefaka rehefa maka ibutamoren. Ity lafiny taha MK 677 ity dia ho tapaka ihany koa rehefa tsy mijanona ilay ibutamoren.
Mety hahatsapa fihazonana rano ihany koa ianao ary mitombo ny filan-tsakafo saingy matetika no mipoitra rehefa mihinana fatra ibutamoren avo loatra ianao. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia miova ho azy irery ireo fiantraikany rehetra ireo rehefa mijanona tsy maka mk 677 ianao.
8. Inona ny fiainana antsasaky ny fiainana MK-677 (Ibutamoren)?
Mk 677 antsasaky ny fiainana dia manodidina ny ora 24. Ny tiana ambara amin'ny teôria dia ny fahazoan'ny olona iray fatra isan'andro ny isan'andro. Fa efa voamarika fa raha maka fatra iray isan'andro isan'andro ianao dia mety miakatra tampoka ny haavon'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboanao.
Afaka manaraka ny fahatsapana havizanana na harerahana izany. Tsy azo ihodivirana izany amin'ny alàlan'ny famafazana ny fatrao amin'ny roa amin'ny indray andro na mihinana ny fatra alohan'ny hatory. Raha manao izany ianao dia matory toy ny mpanjaka ary tsy ho voatangy ny vokatrao mandritra ny ampitso.
9. Vokatry MK-677 (Ibutamoren)
Marina ny milaza fa ny valin'ny Mk 677 amin'ny fanaovana bodybuilding ary ny fampiasana hafa voatonona teo aloha dia mahafinaritra. Ny Ibutamoren dia mandaitra mahomby satria manatsara ny fananganana hozatra, ary koa manampy amin'ny fanatsarana ny hoditra, ny volo ary ny tavy matavy.
Ireo mpampiasa izay nizara ny Mk 677 taloha sy taorian'ny sary sy ny valiny dia naneho fa ibutamoren dia afaka nanova ny fitambaran'ny vatany. Afaka nampiditra hozatra maro be izy ireo raha very tavy amin'ny vatana.
Rehefa ibutamoren dia ampiasaina miaraka amin'ny tranoben'ny vatana ny SARMs toy ny MK-2866 ary LGD-4033, afaka manova tanteraka ny vatanao, manome valin-kafatra fisainana. Tokony ho voamarikao koa fa mila miasa sy mihazona sakafo sahaza ianao raha te hahazo vokatra tsara indrindra momba ny fanatanjahantena ibutamoren (159752-10-0).
10. Mankatoavina ve ny MK-677 (Ibutamoren) FDA?
Hatramin'ny ibutamoren dia mbola fanafody vaovao, dia mbola tsy neken'ny FDA izany. Na izany aza, mk 677 dia nosedrain'ny mpiasan'ny mpamorona matihanina manokana ao amin'ny vondron-tobim-piainana izay miaiky fa azo antoka ny zava-mahadomelina. Nampianarina tamina mpahay siansa koa izay niaiky fa mahomby ny zava-mahadomelina.
11. Azo antoka ve ny MK-677 (Ibutamoren)?
Azo antoka ny Ibutamoren raha alaina amin'ireo fatra natolotra. Tena azo antoka indrindra amin'ny olona salama. Na izany aza, raha ny fanafody dia raisina amina fatra avo kokoa noho ny natoro, ny mpampiasa dia mety hisedra ny edema sy ny hozatra ratra. Fa maninona ianao no te hanao dosie avo kokoa noho ny fatra natolony?
Ary koa ny fiantraikany ratsy vitsivitsy mety hitranga ao anaty ny azy rehefa mijanona tsy mampiasa Ibutamoren ianao. Ankoatr'izay dia mora tanterahina na dia mampiasa ny zava-mahadomelina aza.
12. Ara-dalàna ve ny mividy MK-677 (Ibutamoren)?
Ny ankamaroan'ny olona manontany hoe, amidy ve ny MK 677? Raha iray amin'izy ireo ianao, aza matahotra, hovaliantsika eto ny fanontaniana eto.
Amin'izao fotoana izao, ny vovobony MK-677 (159752-10-0) dia azo amidy fotsiny ho toy ny fanafody fikarohana, koa raha ny ara-jaza, dia sarotra ny mahazo io zava-mahadomelina io raha milaza ianao fa maniry izany. Na izany aza, ny ankamaroan'ny bodybuilders dia milaza fa ny fividianana azy no ampiasaina ho fanamarinana fotsiny. Alohan'ny tsindrio ny bokotra 'MK 677 an-tserasera', alao antoka fa ara-dalàna sy ara-dalàna ny mpamatsy. Tokony ho azonao antoka fa mividy ny fanafody madio indrindra ianao satria ny endrika nutrobal maloto dia mety hisy fiantraikany ratsy.
13. MK-677 (Ibutamoren) ho an'ny fananganana vatana
I Ibutamoren dia nanjary malaza be amin'ny vondron-jaza. Ny tena antony mahatonga ny mk677 nutrobal dia ampiharina be amin'ny fananganana hozatra dia natao ho fanamafisana ny haavon'ny GH. Izay rehetra manana vatana manao bodybuilding dia manantena fatratra sy ho lehibe indrindra.
Koa satria ny hormone mitombo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fananganana vatana, dia ilain'izy ireo izany amin'ny ambaratonga avo kokoa araka izay tratra mandritra ny fijanonana ho voaro. Arakaraka ny haavon'ny haavon'ny fitomboana, ny tosika haingam-pandeha sy mora kokoa dia afaka manampy hozatra fanampiny.
Satria ny Hormone mitombo dia lafo be, tsy misy vahaolana hafa ho an'ny kitapo hanamafisana ny fitomboan'ny hormonina, afa-tsy Nutrabol. Mk 677 dia lafo be raha oharina amin'ny HGH (Hormone mitombo ny olombelona) ary afaka manentana tsara ny haavon'ny fitomboan'ny haavon'ny fitomboan'ny olombelona.
Afaka manao baiko marobe MK-677 an-tserasera ianao. MK 677 amidy dia azo alaina ara-dalàna ho simika amin'ny fikarohana. Ho hitanao ihany koa ireo bodybuilder izay mividy ibutamoren ary milaza fa natao amin'ny fikarohana io ihany.
Zava-dehibe ihany koa ny hoe fantatrao tsara Nutrobal foana SARMs. Ohatra tonga lafatra dia fitambaran ny S23, MK-677, ary RAD140 (Testolone) vovoka.
Tranombokin'ny fitsaboana amerikanina amerikana, Instituto momba ny fahasalamana, Ralf Nass, Suzan S. Pezzoli, Mary Clancy Oliveri, James T. Patrie, Frank E. Harrell, Jr., Jody L. Clasey, Steven B. HeymsfieldMark A. Bach, Mary Lee Vance, ary Michael O. Thorner, MB, BS, D.Sc, ny vokatry ny mimandà am-bavony Ghrelin momba ny fandaminana ny vatana sy ny vokatra ara-pitsaboana amin'ny olon-dehibe salama antitra: fitsapana arakaraka, fehezina.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. lamosina hozatra ary hozaraina amin'ny lehilahy 468 lehilahy sy vehivavy 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000, 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) ho an'ny fitsaboana ireo marary miverina amin'ny fahatapahan-doha: fametrahana multicenter, randomized, plasebo voafehy IIb. Archives of Gerontology and Geriatrics, 53 (2), 183-189.
Ny Pulmonary Aniratika tsara indrindra ho an'ny Cognitive Enhancement
Ny Steroids Anabolic 10 malaza indrindra dia matanjaka	Ny fiheverana mahazatra matetika eo amin'ny tontolon'ny steroids anabolic